Irina Rozanova - ethiyetha yesimanje kanye ifilimu actress, samuntu ubufazi, charm nobuhle. Wazalelwa 1966, July 22, e Ryazan. Intombazane, esineminyaka engu ogama lakhe behlonipha ugogo wakhe, cishe ekhula ekusithekeni, ngakho-ke kunengqondo ukuthi uthando yobuciko yena ngofuzo kubazali bakhe - abadlali Yuri Rozanov futhi Zoi Belovoy. Unina wayezinikele ngakho ukuba imbangela eyithandayo, ukuthi ukudlalwa ukusebenza cishe lonke ukukhulelwa.
Ngu kutimela actress esizayo Irina Rozanova ejwayele kusukela ebuntwaneni, engangiyazi ngekhanda inani elikhulu izindima. Futhi akumangalisi ukuthi ngesikhathi ngineminyaka emihlanu nonina, ayifeza play. Abazali abazi ubunzima umsebenzi wakhe, Ngokuzama ukuqondisa izithakazelo indodakazi yakhe ohlangothini oluhlukile, ikakhulukazi, zomculo, kokuba bavikelekile esebenza.
Kodwa hhayi ngaso Irine Muzyka ekusebenzeni wakhe, wayenomuzwa zonke charm Intombazanyana okhiye omnyama nomhlophe. Yena hlaza wakhe esifubeni sakhe saliphosa ongapheli, ngakho u-Irina wabaleka enhlokodolobha ngenhloso yokwemukela yaseshashalazini esikoleni, kodwa umzamo wokuqala kuhlulekile izivivinyo. Wabuyela ekhaya, wathola umsebenzi Ryazan Drama Theatre ezikhundleni eziningana - artist enze-up, tembatfo umklami, futhi ilungu massovok, futhi ngokulinganisa alungiselela ukungena.
Ekuqaleni indlela wokwenza ...
Lapho elithuma okwesibili, wanika GITIS - Irina wathatha; intombazane abanamakhono futhi ohahela isikhundla wafika Yiqiniso ukukholelwa kuye Oscar Yakovlevich Remez.
esifushane Rozanov kudlalwa ezinkundleni zemidlalo yaseshashalazini Mayakovsky, esikhundleni sako ulethe esikhathini esizayo yamabhayisikobho-studio "ndoda omncane", lapho naye wamenywa ukuba ukudlala "Pannochka" Sergei Zhenovich. Kusukela ngo-1991, besebenza ndawonye ngesikhathi Theatre Malaya Bronnaya futhi ajabulela izethameli ukusebenza ezimangalisayo kuze 1998.
A ukutholakala sangempela Irene kwaba "iNkosi Lear" - umbukwane oyingqayizivele, iqhaza eyayithi wayibona ngokucacile ukuthi indoda Russian.
Umsebenzi kwesikrini lokuqala
Filmography Irina Rozanova wathatha kwaqala e-yokwakha kabusha nangemuva yokwakha kabusha inkathi. Debut kwaba indima Lucy e limitchitsy melodrama social "Umngane wami" (1985) - umsebenzi wokuqala ezimele njengoba umqondisi Aleksandra Kalyagina. Kwabe indima uNatasha e melodrama "Scarlet Stone" Valery Isakov, izikrini ke babe movie ezifana ne Irinoy Rozanovoy, njengoba "Ukuphela ukusebenza" umhlali "futhi" Lapho iminyango zivuliwe. "
A yimpumelelo ifilimu career kwi-actress onethalente waqala umsebenzi ifilimu "Uphi nofelet?" (1987), lapho indima umka-protagonist eyadlalwa Alexander Pankratov-black eseneminyaka nje esingenakuphikiswa. Irina Rozanova, amafilimu kanye ethile esilindele zesifazane, uvele uzimele kwamaminithi ambalwa, kodwa ukuthi isikhathi esifushane ukwaze ukwakha ocebile, isithombe esiqinile abesifazane, ngokugcwele bazogcwalisa ezamehlela engapheli yokubonisana uthando kumyeni wakhe. Kuyinto lokhu actress uhlamvu ngempumelelo futhi ngokuphindaphindiwe elisetshenziswa amabhayisikobho amaningi.
Okunjalo Irina ezahlukene
Njengoba u-Irina Rozanova ahlukahlukene, ezithakazelisayo, ne uhlamvu. Iningi lalaba kubo eyadlalwa umdlali waseshashalazini in the 80s sekwephuzile. Lokhu umfundi Tatiana - umthandi protagonist (Yuri Belyaev) kule drama ngokwengqondo "Uma lied ..." uVladimir Bortko; Maroussia e "drayman neNkosi" - a tragicomedy zomculo uVladimir Alenikova; UMargarita "inceku" - kinopritche Vadim Abdrashitova.
Ngo-1989, u-Irina Rozanova, Filmography wehlukile ngempela futhi kuhlanganisa angaphezu kweshumi nambili imisebenzi ngempumelelo uvele DEBUT we ahlekisayo "Ukuze izintokazi amahle!", Uthwebule yomqondisi Anatoly Eyramdzhanom. By the way, abengumsunguli wako script befilimu "Uphi nofelet" Le filimu, okuyinto wathola imvume ababukeli 'nokubonwa, umqondisi ababebuthene ukhonkolo esihle Ensemble: Alexander abdulov, u-Alexander Pankratov-Cherny Elena Tsyplakova nabanye.
"Intergirl" - ifilimu-isambulo
Ngo-1989, i-Filmography Iriny Rozanovoy agcwaliswa ifilimu Petra Todorovskogo "Intergirl". Lo mlingisi wakwazi ukwakha isithombe eziyinkimbinkimbi ngokwengqondo inhlamba wesifazane indawo Sims Gulliver - womeluki wangaphambili, kanye zashelela. Lona isihloko zobufebe namuhla umuntu singenakwenzeka kuyokushiya umangele futhi ngenkathi ebhayisikobho Uphakamisa kuphela kwesihenqo a Okungishaya uhlangothi ukuphila, ngakho amehlo ifilimu laliphezulu kakhulu. Rozanov kudlalwa Sim izilwane hhayi njengoba ngonya futhi njengomuntu wesifazane, njengoba isiphetho uwile ezimweni ezithile. Kwenzeka konke okunye - Heroine Rozanova babengaphumeleli njalo wokukhiqiza ukuthi uhamba phambili, nezingane ezinhlanu ngezinyawo zabo.
Kusukela 90s, u-Irina Rozanova, amafilimu ngawo ukubamba iqhaza umbukeli ejabula, njalo ivela chungechunge, namaqhawekazi wakhe ukudlala elikhanyayo, okungavamile. Lucky actress kanye nethimba ezithakazelisayo, abenzi mafilimu abanamakhono nozakwethu elimangalisayo imvelo umlingisi sika. Ngo-1990, umdlali sifundzile ifilimu "Cloud-ePharadesi" UNikolai Dostal. Lena indaba "extra" umuntu nenkathi yamaSoviet, kalula kweqiniso, futhi igcwalise umphefumulo nge ubuhlungu kancane. Kulesi sithombe, u-Irina Rozanova e Duet nge Sergey Batalov wadala umbhangqwana olungenakuqhathaniswa; ifilimu futhi wathi Andrey Zhigalov, Anna Ovsyannikov Lev Borisov, uVladimir Tolokonnikov. iminyaka engu-15 kamuva, uNikolai Dostal wabuye wabutha leli qembu elikhulu ukwakha kumdlalo, okwathi kamuva laba kungekhona ukuthi sezizimbi kakhulu futhi kwaba sekupheleni okunomqondo kwaqedwa ingxenye yokuqala. Umdwebo ngokuthi "kolya - tumbleweed." Lona kuphela isibonelo omunye umsebenzi ngempumelelo actress: Irina Rozanova Filmography lisabalele, ahlukahlukene, ezithakazelisayo.
Njalo lucky nge ukhonkolo
Ngo-1992, Peter Todorovski, ngubani Rozanova izinkanyezi ku "Intergirl" futhi wamcela ukuba ngokudweba - "! Encore, Encore" idrama Retro ngokuphila nokuziphatha kwangaleso ekamu lezempi Le ndaba isikrini ukuthi Irina abadlale indima umhlengikazi Luba, izinkulumo athakazelisayo zonke izici zokuphila komuntu: uthando, oshade naye, ngokuxabana, wobugwala, zehlazo, ukufa. Futhi lokhu futhi sizungezwe amakhosi wangempela yesehlakalo - ezifana Yevgeny Mironov, Valentin Gaft, Elena Yakovleva Larisa Malevannaya Alexander Pashutin, uVladimir Ilyin, Sergey Nikonenko Andrey Ilyin. umsebenzi actress ukuthi kuyancomeka ngesikhathi ifilimu emkhosini "Constellation-92" futhi waklonyeliswa umklomelo "Ukuze ukusebenza okuhamba phambili indima isihloko."
Ngo-1992, actress Irina Rozanova inkanyezi kule drama ngokwengqondo Elena Tsyplakova "zisesandleni sakho;" lapho zama umfanekiso ongemuhle. I-movie ekutshela ngekusasa engajabule ngentokazi (indima yakhe eyenziwa Eugene Dobrovol'skaya), okuyinto ku wabaholi umpristi uya ukusebenza ekhaya yezingane. Irina Rozanova abadlale indima othisha - owesifazane nabangenaluthando, futhi sinesihluku ukuthi kalula phakamisa isandla ingane, ukuzilwela wancishwa abazali hhayi kuphela, kodwa futhi yini kwaba uthando.
Lezi eziyinkimbinkimbi 90
kweminyaka engu-90 e namabhayisikobho babe kubenzima washiya abadlali abaningi ngaphandle umsebenzi. Irina lucky kulesi sici kakhudlwana kunamanye, ke imangalelwe, nakuba ngezinye izikhathi tape, okuyinto okwadingeka zisuswe, babe ngokungagwegwesi ababuthakathaka. Kodwa ngalezo zikhathi ezinzima ukhethe akudingekile ikakhulukazi. Lokhu kungabandakanya mafilimu iqhaza Irina Rozanova ngokuthi "u-Alfonso", "Little Demon", amahlaya ome njengeqanda "Ukuphila of the Queen" Valery Ahadova, lapho umdlali kudlalwa janitress Ninka Queen kwesokunxele ngoba umbuso ezishisayo uzokhathala nomyeni wakhe - King Uhotugo ( njengoba u-Alexander Pankratov-black). Ngalesi sikhathi, wadedelwa ahlekisayo "Lapho yakho" Anatoly Eyramdzhana lapho Rozanov kudlalwa Rita - wezindlu on call, njengoba isiphetho babefika 'omusha waseRussia ", bafuna ngodli uthando wakhe bese ugcine owesifazane yakho njalo ngaphansi emehlweni isibhamu.
Irina Rozanova: Filmography, ogawuthola
Namanje izithombe nice naleyo minyaka enzima, u-Irina Rozanova Kwakuhileleke okwengeziwe. Lokhu kungabandakanya ethinta inhliziyo, melodrama cishe ukuzikhohlisa "Ntwana ngoMsombuluko." Esikhathini ifilimu Irina wadala umfanekiso Intombazane enesizungu oseqinile onodadewabo 'uphosa' umyeni wakhe ukuthi Igorya Sklyara. Nguye owayekade uthando yakhe yokuqala, futhi ekugcineni umhlangano ubuso nobuso imizwa lezi abantu baqhumuka ngomfutho ovuselelwe. "Okuhamba phambili indima yabesifazane" Irina wathola umklomelo for ifilimu ngo-1998 ngesikhathi ifilimu emkhosini "Vivat Russia!"
"Izimfihlo Petersburg" - wabukela lonke izwe
Filmography Irina Rozanova kuhlanganisa inqwaba uchungechunge lapho actress inkanyezi. Okudumile ku-90s kwaba uchungechunge oluthi "izimfihlo Petersburg" futhi "izimfihlo Decoupling Petersburg", lapho wathola indima Natalia Alekseevna von Doering. Awama-Soap akha ingxenye enkulu yomsebenzi ifilimu yasekhaya, u-Irina esizicabangelayo njengezaba ngokoqobo ngenakugwemeka, kulokhu isici.
Kodwa u-Irina futhi lapha isikhathi mawuvuleke, enika ifilimu okwakhe yayo izithombe ngokucace. It Lukerya Y. e "USalome", Valery Astakhov - pilot-umfundisi "Amazons Russian", umka Nurali Aslanbekova e "Madoda," umbhali Tomilina e "Kamenka-2", Elena Anurova e "iNkosikazi" nabanye.
Irina ka Aleksandre Abdulove
Omunye abalingani Irina Rozanova naye wayehlale lucky, kwaba Alexander abdulov. Ucwaningo kuqala ngokuhlanganyela esenzeka ifilimu "Ukuze izintokazi amahle!" Ngo-1995, baphinda bahlangana ku melodrama esikisela ucansi "Black Veil" Aleksandra Buravskogo lapho abdulov wadlala indima iphoyisa we Ural Andrew Rokshina futhi Rozanov wazibonakalisa ngokuphelele ngokwayo e indima kumqashi wakhe Alekseevny Olympics. New umsebenzi ngokuhlanganyela uqalisiwe ngemva kweminyaka eyisithupha futhi: "Ice Age" futhi "fatalist", ngemva kwalokho izethameli cishe abadlali oshadile. ukuphila Siqu Irina Rozanova njalo kwavusa isithakazelo phakathi nabalandeli bakhe. Rozanov ngokwabo abdulov kanye nobudlelwane ezihambisana nobungane, hhayi ngaphezulu. Kodwa ngo-Alexander Irina Rozanova zayijabulela kakhulu njengoba indoda. Lo muntu nge nobuhle bangaphakathi.
Kunjalo-ke ukuphila Bani ezibulala ngomsebenzi
Sebenza for actress, has a amandla onamandla nokudala kokubili esikrinini bese enkundleni uhlamvu enamandla kakhulu - okushiwo eyinhloko ekuphileni; kungcono usukhathele umsebenzi njalo, kunokuba ahlale izandla. Ngakho-ke, ngaso sonke isikhathi ziphoqa, ethelayo kakhulu ukususwa. Ama-movie ne Irinoy Rozanovoy beqonda kalula umbukeli, ngoba actress ngobuciko lidlulisela zamandla izinhlamvu yakhe, imizwelo, imizwa izinkinga futhi nakho. Singasho ukuthi isithombe isihenqo Maria Petrovna kule drama "Savage" owesifazane ngokujulile engajabule abaphethwe nandaba yendoda yakhe, kodwa akazange akhohlwe nakancane ekuboniseni lobu buthakathaka, babesuke emaqinisweni okuphila. Ukuze umsebenzi wakhe kule filimu, u-Irina Rozanova waklonyeliswa "Kuhle Umlingisikazi" umklomelo.
Ngokuhamba kwesikhathi sakhe khulula ngokudubula Irina ofunda eziningi uhamba. Izingane Irina Rozanova - ngesihloko ukuthi kuyasithakazelisa ukuze abayithandayo eziningi ithalente lakhe. izingane zabo, actress akuyona, kodwa isikhathi esiningi ukuze abashana.
Uma kungenzeka, Irina Ngibonga abazali bakhe Ryazan. Izitolo actress iyaya kuphela njengoba kudingeka, kodwa uthanda ukuhamba, uma ucabanga ukuthi imali engcono wachitha uhambo eziningi imizwelo kunanoma iyiphi amanikiniki, ingozi ukuze uthole nesithukuthezi emva kwesikhashana.
Umlingisikazi Irina Rozanova: uthando ukuphila
Irina Rozanova izikhathi eziningana ukushada, kodwa awukho umshado wamlethela injabulo yeqiniso. Okuhlangenwe nakho umndeni wokuqala kwaba yinto yesikhashana, futhi kwakungekho usengumfundi; Irene kwaba okhethiweyo umqondisi esizayo Eugene Kamenkovich. Ukuhlola imizwa kudingeka iminyaka 2 kuphela. Okulandelayo ku-indlela yokuphila ngahlangana umqondisi Irina Dmitry Meskhiev. romance yabo wamenyezela, kodwa ngokushesha.
Ngesinye imikhosi Irina wahlangana Ngokuzayo umyeni wesibili Timur - Usomabhizinisi, naye akazange ahlale isikhathi eside ekuphileni kwakhe. Lo mbhangqwana behlukana.
Okwesithathu womshado olusemthethweni kwaba Gregory Belenky - ". Izingane ngoMsombuluko" Cinematographer, ujwayele owawusedolobheni ifilimu Umshado kubantu abanobuciko iphahlazeka ekhuluma ngokuphila komkhaya.
On the ifilimu "Tanker" Tango "kuqondiswe abakwa-Irina iwine Bahtiyara Hudoynazarova, abamzwise bashiya ngenxa ubunjalo umlingani ashisayo.
ukuphila Siqu Irina Rozanova, nezinkinga zayo kanye nezingibe, bona kuphambuke uthando olukhulu izilaleli zakhe. Lo mlingisi amangalelwe, wayemthanda, onekhono, ebukekayo. Izingane Irina Rozanova - kwaba umshana wakhe. Ebhekisela kuwo, u abantu bayo bomdabu, inikeza uthando aso agcwele isetshenziswe, bezama ukuba kumile kubo izakhamuzi wemfanelo lomphakathi.
Alexander Porokhovshchikov: Biography futhi Filmography umlingisi Russian. Izimbangela zokufa Aleksandra Porohovschikova